Mampiankin-doha ve ny « produits » fanao amin’ny tarehy ?
Maro amin’ny vehivavy malagasy no manam-paniriana te hikolokolo ny tarehy, rehefa tonga amin’ny taona sy fotoana iray.
Isan’ireo sakana ho an’ny ankamaroany anefa ny hoe : sao hiankin-doha amin’ilay akora ny tarehy, ka raha vao tsy mampiasa dia simba. Fantaro anefa fa na tsy misy olana aza ny tarehy dia mila koloina sy arovana mba ho tsara lalandava. Anjaranao indray avy eo, ny mifantina izay akora azo antoka.
Mamantatra ireo “produits” tsara
Maro ny karazana “produits” mitobaka eny antsena ary sahirana ny olona misafidy izay ampiasaina. Manahy koa anefa ny ankabeazan'ny olona sao vao mampiasa izany eo dia tsy ho afaka intsony. Raha toa ka “produits” manara-penitra sy vita fitiliana tsara no ampiasaina dia tsy tokony hisy izay fiankinan-doha izay, na kely aza. Rehefa ajanona fotsiny ny fampiasana azy dia tsy hahita vokatra mitovy amin’ilay tamin’ny nampiasa azy intsony. Dia mipetraka eo ny safidy : ilain’ilay olona ve ny mikarakara an’ilay tarehy maharitra, sa atao mandalo ihany izany ? Hampiasa akora hafa indray ve ?
Tsy izy raha vao mampiankin-doha
Raha akora tsy azo antoka, namidy teny rehetra teny kosa no ampiasaina, dia mety hisy fiantraikany. Raha mahatsiaro ho miankin-doha dia tsy mahomby izay ny akora ampiasainao. Raha vao tsy mampiasa an’ilay “produits” dia miova tsikelikely ilay hoditra, miharatsy kalitao ihany koa ka toy ny zava-mahadomelina ho azy ilay akora. Noho izany, tsy azo atao mihitsy ny mividy akora avy hatrany fa aleo manatona matihanina foana aloha mba hanoro hevitra.
Tsy ny lafo no tsara
Betsaka ny matahotra mividy akora azo antoka fikoloana tarehy, sao dia hanimba azy. Sakana hafa koa ny hoe : lafolafo izy ireny. Tsy midika velively anefa izany hoe : rehefa lafo dia tsara ny akora iray. Mety ho tsara sy lafo koa anefa, saingy tsy mifanaraka amin’ny hoditr’ilay nampiasa azy. Ny fitsipika fototra dia mila mahafantatra ny sokajin’ny hodiny sy ny akora fady aminy ny vehivavy. Mila fantarina tsara ihany koa ny hetahetan’ilay hoditra, ka miainga amin’izay ny fikolokoloana na fitsaboana atao. Any amin’ny matihanina ihany anefa no hahafahana mahazo antoka izany. Mialohan’ny hampiasa akora, hikitika tarehy, dia tsara foana ny maka hevitra, na indray mandeha fotsiny aza, amin’ireo matihanina.
Isaorana i Ambinintsoa Rasoanaivo , Beauty And'Ntsoa Faravohitra.
Fifandraisana : 033 11 276 98.